Maka: isivinini sekhasi » Martech Zone
Maka: isivinini sekhasi
Isikhathi sokufunda: 6 imizuzu Iningi lamasayithi lilahlekelwa cishe uhhafu wezivakashi zabo ngenxa yejubane lekhasi elincane. Eqinisweni, isilinganiso esiphakathi sekhasi lewebhu ledeskithophu singama-42%, isilinganiso esiphakathi sekhasi lewebhu elihamba phambili lingama-58%, futhi isilinganiso esiphakathi kokuchofoza kokufika kokuchofoza kokukhishwa kwamakhasi sisuka ku-60 kuye ku-90%. Akuzona izinombolo ezithophayo nganoma iyiphi indlela, ikakhulukazi uma kubhekwa ukusetshenziswa kweselula kuyaqhubeka nokukhula futhi kuya kuba nzima ngosuku ukuheha nokugcina ukunakwa kwabathengi. Ngokuya nge-Google, i-
Kungani Kufanele Usebenzise Ukucindezela Kwesithombe
NgoLwesibili, ngoJuni 19, i-2018 NgoMgqibelo, Juni 23, 2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Lapho abadwebi bezithombe nabathwebuli bezithombe bekhipha izithombe zabo zokugcina, ngokuvamile azithuthukiswanga ukunciphisa usayizi wefayela. Bengikhuluma noCaleb Lane, umxhumanisi wezokuphepha nokwenza ngcono i-WordPress, futhi wabona ukuthi osayizi bezithombe esizeni sethu babebakhulu impela (ngaphezu kwezinye izindaba eziningi azosisiza ukuthi sizisebenzise). Siyabonga ku-Erik Deckers ngesingeniso! Ukuba nezithombe ezinkulu akusho ukuthi udinga ukuba nosayizi abakhulu bezithombe.
9 Amaphutha Abulalayo Awenza Amasayithi Ahambe kancane
NgoLwesine, Januwari 11, 2018 NgoMgqibelo, Januwari 13, 2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Amawebhusayithi ahamba kancane athonya amazinga we-bounce, amazinga wokuguqulwa, kanye namazinga akho wenjini yokusesha. Lokho kusho, ngiyamangala ngenani lamasayithi aqhubeka kancane ngokudabukisayo. U-Adam ungikhombise isayithi namuhla elibanjwe kuGoDaddy ebelithatha ngaphezu kwemizuzwana eyi-10 ukulayisha. Lowo mpofu ucabanga ukuthi bonga izizumbulu ekusingatheni… esikhundleni salokho balahlekelwa amathani emali ngoba abazoba ngamakhasimende abo bayayikhokhela. Sikukhulise ukufundwa kwethu impela
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Sibhale kancane mayelana nezici ezithinta ikhono lewebhusayithi yakho ukulayisha ngokushesha futhi sabelane ngokuthi izivinini ezihamba kancane zililimaza kanjani ibhizinisi lakho. Ngimangele ngobuqotho ngenani lamakhasimende esixhumana nawo asebenzisa isikhathi esiningi namandla ekuthengiseni nasekusebenziseni amasu wokukhuthaza - konke ngenkathi kulayishwa kumgcini ophansi onesiza elingalungiselelwe ukulayishwa ngokushesha. Siyaqhubeka nokuqapha ijubane lethu lesiza futhi
Izindlela eziyi-15 zokukhuphula isilinganiso sakho sokuguqulwa kwe-Ecommerce
NgoMgqibelo, ngoMeyi 28, 2016 NgeSonto, uDisemba 24, i-2017 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Besisebenza nesitolo sevithamini nesengezo ku-inthanethi ukusiza ukukhulisa ukubonakala kosesho lwabo namazinga wokuguqulwa. Ukuzibandakanya kuthathe isikhathi esincane nezinsizakusebenza, kepha imiphumela isivele iqala ukukhombisa. Isiza besidinga ukwakhiwa kabusha futhi sakhiwe kabusha kusuka phansi kuya phezulu. Ngenkathi bekuyisayithi elisebenza ngokugcwele phambilini, belingenazo izinto eziningi ezidingekayo zokwakha ukwethembana nokwenza lula ukuguqulwa okulandelayo